Girls’ Generation အဖွဲ့ဝင်မမတွေကြောင့် မျက်ရည်ကျခဲ့ရတဲ့ Seohyun 🌸 – Trend.com.mm
Girls’ Generation အဖွဲ့ဝင်မမတွေကြောင့် မျက်ရည်ကျခဲ့ရတဲ့ Seohyun 🌸
ကေပေါ့ပ်ပရိသတ်တွေဆိုရင် Girls’ Generation အဖွဲ့ဝင်တွေတစ်ယောက်ကိုတစ်ယောက် ဘယ်လောက်ထိချစ်ခင်ရင်းနှီးကြလဲဆိုိတာသိပြီးသားဖြစ်မှာပါ။၁၀နှစ်ကျော်နီးပါးအတူတူရပ်တည်လာကြတဲ့အဖွဲ့ဖြစ်တဲ့အတွက် ဘယ်လောက်ပဲအနုပညာလမ်းကြောင်းတွေပြောင်းပြောင်း ခင်မင်ရင်းနှီးမှုကတော့မပြောင်းမလဲရှိနေတယ်ဆိုတာ မကြာသေးခင်ကပဲ သက်သေပြခဲ့ကြပါတယ်။
အဖွဲ့ဝင်တစ်ယောက်ဖြစ်တဲ့ Seohyun ဟာ ဂီတလောကအပြင် သရုပ်ဆောင်လောကထဲကိုပါခြေချနေပါပြီ။လူကောင်းလူဆိုးလို့နာမည်ကျော်ခဲ့တဲ့ဇာတ်လမ်းတွဲမှာလည်းသူမဟာ ခေါင်းဆောင်မင်းသမီးအဖြစ်ပါဝင်ခဲ့ပြီး အခုလက်ရှိမှာလည်း “Time” ဇာတ်လမ်းတွဲကိုရိုက်ကူးနေပါတယ်။
တစ်ကိုယ်တော်အခွေထွက်ဖို့ကြိုးစားနေတဲ့ အဖွဲ့ဝင် Tiffany ဟာလည်း ဘယ်လောက်ပဲ အနုပညာလမ်းကြောင်းကွဲပါစေ သူငယ်ချင်းဖြစ်တဲ့ Seohyun အတွက် အားပေးဖို့လည်းမမေ့လျော့ခဲ့ပါဘူး။Seohyun ရဲ့ ရိုက်ကွင်းကို ကော်ဖီကားလေးပို့ပေးခဲ့ပြီး သူမရဲ့ ချစ်ခြင်းမေတ္တာကိုပြသခဲ့ပါတယ်တဲ့။အဲ့ဒီမှာပဲ Girls’ Generation ရဲ့ ကျန်တဲ့အဖွဲ့ဝင်တွေဟာလည်း Seohyun နဲ့ရိုက်ကူးရေးအဖွဲ့သားတွေအတွက် “Seo Joohyun! Haveacup of coffee if you have time” ဆိုတဲ့စာတန်းလေးနဲ့ ကော်ဖီကားတွေပို့ပေးခဲ့ကြပါတယ်။
Hyoyeon ဟာဆိုရင် Seohyun အတွက်အချိန်ပေးပြီးတကူးတကသွားတွေ့ကာ အားပေးခဲ့ပါသေးတယ်။ဒီလိုအချိန်ပေးပြီးအားပေးတဲ့အတွက် ၀မ်းသာကြည်နူးမိပြီး ငိုတောင်ငိုမိတဲ့အကြောင်းကို Seohyun က သူမရဲ့အင်စတာဂရမ်အကောင့်ကနေ “အစ်မ Hyoyeon ကိုတွေ့တဲ့အချိန်
မျက်ရည်တွေဘာလို့ ကျလာမှန်းမသိပါဘူး။အရမ်းပင်ပန်းနေတဲ့အချိန် ဒီလိုအစ်မတွေရဲ့အားပေးမှုက တကယ့်ကိုကြည်နူးအားဖြစ်စေခဲ့ပါတယ်။ကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်။ပျော်လည်းပျော်တယ်။ပြီးတော့ အဖွဲ့ထဲမှာအငယ်ဆုံးဖြစ်ရလို့ ကျေလည်းကျေနပ်မိပါတယ်။ညီမ အစ်မတို့ကိုအရမ်းချစ်တယ်ဆိုတာ သိတယ်မှတ်လား?အခုလိုအနုပညာလမ်းကြောင်းကိုယ်စီနဲ့ဝေးကွာနေပေမဲ့ ခင်မင်စရာအကောင်းဆုံးအစ်မတွေက အမြဲအတူရှိနေပါတယ်။ချစ်တယ် အစ်မ Hyoyeon အခုလိုအလုပ်များနေတဲ့ကြားက ညီမရဲ့ ရုပ်ရှင်ရိုက်ကွင်းကိုလာပေးတဲ့အတွက် 💕 အများကြီးချစ်တယ် You’re the best💋 “ဆိုပြီး ရေးသားခဲ့ပါတယ်။
ကပေေါ့ပျပရိသတျတှဆေိုရငျ Girls’ Generation အဖှဲ့ဝငျတှတေဈယောကျကိုတဈယောကျ ဘယျလောကျထိခဈြခငျရငျးနှီးကွလဲဆိုတာသိပွီးသားဖွဈမှာပါ။၁ဝနှဈကြျောနီးပါးအတူတူရပျတညျလာကွတဲ့အဖှဲ့ဖွဈတဲ့အတှကျ ဘယျလောကျပဲအနုပညာလမျးကွောငျးတှပွေောငျးပွောငျး ခငျမငျရငျးနှီးမှုကတော့မပွောငျးမလဲရှိနတေယျဆိုတာ မကွာသေးခငျကပဲ သကျသပွေခဲ့ကွပါတယျ။
အဖှဲ့ဝငျတဈယောကျဖွဈတဲ့ Seohyun ဟာ ဂီတလောကအပွငျ သရုပျဆောငျလောကထဲကိုပါခွခေနြပေါပွီ။လူကောငျးလူဆိုးလို့နာမညျကြျောခဲ့တဲ့ဇာတျလမျးတှဲမှာလညျးသူမဟာ ခေါငျးဆောငျမငျးသမီးအဖွဈပါဝငျခဲ့ပွီး အခုလကျရှိမှာလညျး “Time” ဇာတျလမျးတှဲကိုရိုကျကူးနပေါတယျ။
တဈကိုယျတျောအခှထှေကျဖို့ကွိုးစားနတေဲ့ အဖှဲ့ဝငျ Tiffany ဟာလညျး ဘယျလောကျပဲ အနုပညာလမျးကွောငျးကှဲပါစေ သူငယျခငျြးဖွဈတဲ့ Seohyun အတှကျ အားပေးဖို့လညျးမမလြေ့ော့ခဲ့ပါဘူး။Seohyun ရဲ့ ရိုကျကှငျးကို ကျောဖီကားလေးပို့ပေးခဲ့ပွီး သူမရဲ့ ခဈြခွငျးမတ်ေတာကိုပွသခဲ့ပါတယျတဲ့။အဲ့ဒီမှာပဲ Girls’ Generation ရဲ့ ကနျြတဲ့အဖှဲ့ဝငျတှဟောလညျး Seohyun နဲ့ရိုကျကူးရေးအဖှဲ့သားတှအေတှကျ “Seo Joohyun! Haveacup of coffee if you have time” ဆိုတဲ့စာတနျးလေးနဲ့ ကျောဖီကားတှပေို့ပေးခဲ့ကွပါတယျ။
Hyoyeon ဟာဆိုရငျ Seohyun အတှကျအခြိနျပေးပွီးတကူးတကသှားတှကေ့ာ အားပေးခဲ့ပါသေးတယျ။ဒီလိုအခြိနျပေးပွီးအားပေးတဲ့အတှကျ ဝမျးသာကွညျနူးမိပွီး ငိုတောငျငိုမိတဲ့အကွောငျးကို Seohyun က သူမရဲ့အငျစတာဂရမျအကောငျ့ကနေ “အဈမ Hyoyeon ကိုတှတေဲ့အခြိနျ
မကျြရညျတှဘောလို့ ကလြာမှနျးမသိပါဘူး။အရမျးပငျပနျးနတေဲ့အခြိနျ ဒီလိုအဈမတှရေဲ့အားပေးမှုက တကယျ့ကိုကွညျနူးအားဖွဈစခေဲ့ပါတယျ။ကြေးဇူးအမြားကွီးတငျပါတယျ။ပြျောလညျးပြျောတယျ။ပွီးတော့ အဖှဲ့ထဲမှာအငယျဆုံးဖွဈရလို့ ကလြေညျးကနြေပျမိပါတယျ။ညီမ အဈမတို့ကိုအရမျးခဈြတယျဆိုတာ သိတယျမှတျလား?အခုလိုအနုပညာလမျးကွောငျးကိုယျစီနဲ့ဝေးကှာနပေမေဲ့ ခငျမငျစရာအကောငျးဆုံးအဈမတှကေ အမွဲအတူရှိနပေါတယျ။ခဈြတယျ အဈမ Hyoyeon အခုလိုအလုပျမြားနတေဲ့ကွားက ညီမရဲ့ ရုပျရှငျရိုကျကှငျးကိုလာပေးတဲ့အတှကျ 💕 အမြားကွီးခဈြတယျ You’re the best “ဆိုပွီး ရေးသားခဲ့ပါတယျ။
အိမ်ထောင်ကျသွားတဲ့အခါ ဒီလိုအရာလေးတွေတော့ ကြုံလာရလိမ့်မယ်…
ကိုယ့်ကိုကိုယ် သတ်သေဖို့ ကြိုးစားခဲ့တယ်လို့ ကောလဟာလတွေထွက်လာတဲ့ Koo Hara